UNA Convention 2021 - Prize Distribution
Sports Registration 2021
UNA Youth Program
Soccer Tournament 2021
Sponsors Package 2021
Founders & Executives
युएनए सम्मेलनमा आयोजना हुने बिबिध बाल/बालिका प्रतियोगितामा उत्साहजनक सहभागिता ,बिजेतालाई नगद तथा पुरस्कार दिइने
डिसी महानगर । आगामी मे २२ -२३ तारिख दुई दिनसम्म चल्ने युएनए सम्मेलनमा आयोजना हुने बिभिन्न बाल/बालिका प्रतियोगितामा कम्तीमा ४५ जना प्रतियोगीहरु सहभागी हुने भएका छन् ।
युनाइटेड नेप्लिज एसोसिएसन (युएनए)को पाँचौ सम्मेलनमा बिगत बर्ष झैँ यस बर्ष पनि नृत्य,गायन /गीत,वादविवाद तथा प्रतिभा प्रतियोगिता हुने छन् । उक्त विभिन्न प्रतियोगिताहरुलाई बिना खड्का लामाले संयोजन गरि रहेकी छिन ।
उनले दर्ता प्रक्रिया समाप्त भएको जनाउदै उत्साहजनक सहभागिता हुने भएकोमा हर्ष व्यक्त गरेकी छिन । उनले सबैलाई उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन् अनुरोध गरेकी छिन ।
उनका अनुसार सम्मेलनमा आयोजना हुने नृत्य ,गीत तथा वक्तृत्व प्रतियोगिता प्रथम,द्वितीय र तृतीय हुनेलाई नगद तथा पुरस्कारको व्यवस्था समेत गरिएको बताइन ।
नृत्य ,गीत तथा वक्तृत्वमा प्रथम हुनेलाई ५ सय डलर,द्वितीय हुनेलाई ३ सय डलर र तृतीय हुने लाई २ सय डलर प्रदान गरिने भएको छ । यी सबै कार्यक्रमहरु भर्चुअल(परोक्ष अर्थात् जुम मार्फत ) हुनेछन् । विजयीहरुका लागि प्रदान गरिने पदक पनि तयारी अवस्थामा छ ।
लामाले जानकारी गराए अनुसार मे २२ अर्थात् पहिलो दिन ११ बजे पूर्वीय समय अनुसार नृत्य प्रतियोगिता हुनेछन् भने त्यस पछि ४ बजे गायन/ सांगीतिक कार्यक्रम हुने छ । त्यसैगरी मे २३ का दिन ११ बजे बिहान (पूर्वीय समय) मा वादविवाद प्रतियोगिता हुने छ भने मे २३ कै दिन दिउसो ४ बजे प्रतिभा प्रतियोगिता साथै भेषभुषा प्रदर्शन(फेसन सो)को आयोजना गरिने छ ।
नृत्य/संगीत र गायनका लागि ५ देखि १० बर्ष र ११ देखि १७ बर्ष उमेरकाले भाग लिन पाउने छन् । अंगेजी,नेपाली र अन्य जातजातिका भाषामा नृत्य ,गायन र संगीत प्रस्तुत गर्न सक्ने छन् । जुमबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछ भने समय ५ मिनेट दिईने छ भने एक चरण मात्रको हुनेछ ।
त्यस्तै गरि वादविवाद प्रतियोगिताको लागि ६- ८ बर्ष एक समूह र ९-१२ बर्ष उमेरका एक समूहमा विभाजित हुनेछन । समय ३-४ मिनेट दिइने छ भने कार्यक्रम मे २३ अर्थात् दोश्रो दिन हुनेछ । यसै गरी बालबालिकाको भेषभुषा प्रस्तुति ५-१७ बर्षकाले सहभागी हुन् पाउने छन् । पोसाक नेपाली संस्कृति साथै अन्तरराष्ट्रिय झल्किने लगाउन पाउने छन् ।
मे २३ मा हुने प्रतिभा प्रतियोगितामा ५-१२ सम्म का बालबालिकाहरु हुने छन् । गीत,संगीत र नृत्य बाहेक अन्य प्रतिभा प्रस्तुत गर्नु पर्ने छ । समय केवल २ मिनेट मात्र दिइने छ । युएनएले सदैव सम्मेलन मेमोरियल डे (स्मारक दिवस ) को सप्ताहको सेरोफेरोमा गर्दै आएता पनि गत बर्ष २०२० मा कोरोना महामारीको कारण सम्मेलन रद्ध गरेको थियो ।
संस्थाका अध्यक्ष भक्त भण्डारी हुन् । सम्मेलन संयोजक चन्द्र लामा हुन भने सह संयोजक सन्तोष बिडारी हुन् ।
युएनए सम्मेलनमा आयोजना हुने विभिन्न खेलकुदको समय र स्थान सहित खेल तालिका सार्वजनिक
युएनए सम्मेलनमा महिला कार्यक्रम हुने
युएनए सम्मेलनमा टेनिस खेल पनि खेलाइने
Your newsletter subscription request has been sent.
UNITED NEPALESE ASSOCIATION
Hotel Booking Contact
© 2022 UNA Convention. All rights reserved.